गृहजिल्ला पुगेर प्रचण्डले भने – केन्द्रीय राजनीतिमा जटिलता र दबाब देखापर्‍यो
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सभामुख चयनको विषयतर्फ संकेत गर्दै केन्द्रीय राजनीतिमा जटिलता र दबाब देखा परेको बताएका छन् ।
गृहजिल्ला चितवनमा आयोजित प्रथम माडी खिचरा महोत्सव २०७६ लाई सम्बोधन गर्दै मंगलवार प्रचण्डले केन्द्रीय राजनीतिमा दबाब हुँदाहुँदै पनि आफू समय निकालेर माडी आएको बताए ।
प्रतिनिधिसभा सभामुख रिक्त रहेको अवस्थामा नेकपाभित्र देखिएको विवादलाई छाडेर प्रचण्ड गृहजिल्ला पुगेका छन् । सभामुख चयनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको राजीनामा माग्ने भनेर नेकपा सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको निर्देशनलाई समेत चुनौती दिइरहेकी छन् । उनले सभामुखको नामबारे निर्णय नहुँदासम्म राजीनामा नदिने अडान लिएकी छन् ।
सभामुख चयनको सकसबीच माडी पुगेका प्रचण्डले राजनीतिमा जटिलता देखिएको बताए । ‘मलाई निकै दबाब थियो, साथीहरूले नजा भन्दै थिए,’ प्रचण्डले भने, ‘काठमाडौंमा केन्द्रीय राजनीतिमा जटिलता जस्ता घटना देखा पर्न खोज्छन् । ती समाधान गर्न लगातार छलफल गर्नुपर्ने थियो । यस्तो बेला बाहिर नजान साथीहरूले भनिराख्नुभएको थियो । मैले माडी जाने नै भए, २ घण्टाका लागि भनेर आएँ । बेलुका काठमाडौं फर्केर थुप्रै मिटिङ गर्नुछ ।’
माडीको विकास र सुधारका लागि आफूले निरन्तर संघर्ष गरिरहेको प्रचण्डले बताए । राष्ट्रियसभा उम्मेदवार छनोटको विषयलाई समेत प्रचण्डले माडीसँग जोडे । ‘माडीको सम्मान होस् भनेर राष्ट्रियसभा उम्मेदवार निर्धारण गर्दा स्व. डीआर पौडेलकी पत्नी माडीकै चेली गंगा बेलबासेलाई जनताको पीडा कम गर्ने उद्देश्यका साथ उम्मेदवार बनाउन मेहनत गरें,’ उनले भने, ‘राष्ट्रियसभामा पनि माडीका जनताका आवाज घन्किउन् भन्ने उद्देश्यको साथ निर्णय गरिएको छ ।’